FIFA oo ganaax dul dhigtay Barcelona - BBC Somali
Guddiga maamula kubada cagta adduunka ee FIFA, ayaa ku soo rogay ganaax lagaga mamnuucayo mudo 14 bilood ah kooxda heysata horyaalka Spain, ee Barcelona, in ay gataan wax ciyaartooy ah kaddib markii ay jabisay sharciyo la xiriira kala iibsiga caalamiga ah ee ciyaartoyda da'doodu ka yar tahay 18 sano.
FIFA ayaa waxa ay leedahay xeerar adag oo ku saabsan saxiixa naadiyada ay kusoo qaataan ciyaaryahanada shisheeye ee da'yarta ah, Barcelona-na waxaa lagu helay dambi ah in ay ku xad gudubtay qawaaniinta FIFA ilaa iyo toban xaaladood.
FIFA ayaa waxa ay leedahay kooxda looma oggolaan doono in ay soo iibsato ciyaaryahan, heer qaran ah ama caalami, labada xilli ee la kala iibsado ciyaartooyda ee soo socota.
Sidoo kale waxay ku ganaaxday Barcelona iyo Ururka kubada cagta ee Spain in ka badan 500 oo kun oo doolar kiiba.
FIFA oo ka shireysa koobka 2022 ee Qadar
3 Oktoobar 2013